Thola izinzuzo zokusebenzisa i-serum yezinwele | Bezzia
USusana Garcia | 03/04/2021 20:00 | Ubuhle, Imikhiqizo yobuhle
Akukhathalekile ukuthi izinwele zakho zinde, zimfushane, zisontekile, ziqondile, nsundu, nsundu noma blonde, ngoba okuvame ukubaluleka ekugcineni ukuthi unezinwele ezinempilo futhi ozinakekelayo, into engatholakali kalula. Sizokunikeza okunye mingaki imibono yokufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-hair serum. Njengoba nje sinakekela ubuso bethu, kubalulekile futhi ukunakekela impilo yezinwele. Kubalulekile ukufaka imikhiqizo edingekayo yalokhu.
Sizokhuluma ngakho kungani kufanele usebenzise i-serum yezinwele kanye nezinzuzo zokwenza kanjalo. I-serum ingumkhiqizo esiwutholayo nangobuso futhi obunezimpahla ezigxile ekunakekeleni izinwele ngokujule, zisebenza lapho kudingeka khona, ngoba kunezinhlobo eziningi ze-serum.
1 Yenzelwe ini
2 Uyifaka kanjani i-serum
3 Iseramu yazo zonke izinwele
El I-hair serum ingumkhiqizo osebenzayo wokunakekela kakhulu izinwele ezilimele kakhulu noma ezidinga ukunakekelwa okwengeziwe, ngaphezu kwalokho esikunikeza usuku nosuku. Kule mikhiqizo kuvame ukuba nokuhlushwa okuphezulu kwezithako ezisebenzayo ezisiza ukulungisa umonakalo wezinyanga ezinweleni, yingakho zithambekele ekubeni izimonyo ezibiza kakhulu. Yize kuyiqiniso futhi ukuthi ama-serum asetshenziswa kuphela ngezikhathi ezithile, ukwenza ikhambi lokunakekelwa kwezinwele. Ungathola ama-serum ajwayela izidingo ezahlukahlukene, kepha iqiniso ukuthi lezi zinhlobo zemikhiqizo ngokujwayelekile zivame ukugxila ekunikezeni izinwele zikhanye, zivale ama-cuticles, ziwufake amanzi nokunakekela isikhumba.
Uyifaka kanjani i-serum
El i-hair serum ivame ukufakwa ngobungako obuncane kakhuluNjengoba kungumkhiqizo ogxilile, akufanele sisebenzise kakhulu. Okufanayo kuya kuma-serum obuso. Ngamaconsi ambalwa ibhucungwa izinwele ezomile noma ezimanzi, kuya ngomphumela oyifunayo. Kusetshenziswa emaphethelweni futhi kuyenyuka. Imvamisa ingasetshenziswa nasekhanda nasempandeni. Kunoma ikuphi, kufanele ngaso sonke isikhathi sifunde imiyalo yomkhiqizi ukuze sazi ukusetshenziswa kwayo ngqo nokuthi isatshalaliswa kanjani.
Iseramu yazo zonke izinwele
Namuhla sithola amathuba amaningi ngokwezimonyo. Enye yazo ukuthi singabona izinhlobo eziningi ze- imikhiqizo yezinwele ngendaba yeserum. Enye yezinto ezithengwa kamuva nje yilona eligxile ekunakekeleni izinwele ngokusebenzisa ukushisa, futhi nokugwema i-frizz. Lezi zinhlobo ze-serum zivame ukusetshenziselwa ukugeza izinwele ngakunye ukuze izinwele zingalimazi ngokusebenzisa amathuluzi okushisa afana nezinsimbi noma i-blow dryer. Umphumela uba izinwele ezivikelekile nge-cuticle evaliwe, ecwebezelayo nangaphandle kokuhlukaniswa. Kuyiserum evikela futhi ivimbele ukonakala kwezinwele.
El izinwele ezisontekile ngolunye uhlobo lwezinwele okufanele uzifune i-serum efanelekayo izici zayo. Kukhona okunye okungasiza ukugcina i-curl ne-hydrate. Le nwele ivame ukoma futhi ilahlekelwe ukukhanya, ngaphezu kokubamba kalula, ngakho-ke i-serum ingaba ukwengeza okuhle ukuyinika i-hydration eyengeziwe ngezikhathi ezithile egcina ama-curls echaziwe futhi enziwe ngamanzi. UFrizz ungenye yezitha ezinkulu zalolu hlobo lwezinwele.
El i-serum to hydrate ingenye yezinto ezifunwa kakhulu. Imvamisa, uma sifuna i-serum esezingeni eliphakeme, ukufakela ngokujulile zonke izinhlobo zezinwele. Kukhona i-serum engatholakala ngisho ngentengo engabizi kakhulu futhi esisiza ukuthi sinikeze i-hydration eyengeziwe ezinweleni. Inkinga yemiphetho eyomile yinto ecishe yenzeke futhi ama-serum angasiza ekuqedeni lokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Kungani kufanele usebenzise i-serum yezinwele
Ukuzivocavoca okuzuzisayo kwe-osteoarthritis